Fifamoivoizana: Nanao fitsirihana tampoka taty Vakinankaratra ny avy amin’ny foibe mpitsara fiarakodia
vendredi, 01 novembre 2019 17:59
Nanantotosa fitsirihana sy fisavana tampoka ny fiara tamin’iny lalam-pirenena faha-34 iny ny teo anivon’ny sampandraharahan’ny fitsarana fiarakodia ny alarobia 30 oktobra. Antsirabe no nisantarana izany, ary hitohy amin’iny zotra makany Morondava sy Toliary iny.
Raha ny nambaran’ny Kapiteny Razandriniherinjokiny Honoré, dia ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy famerenana ny fanarahan-dalàna no tanjona amin’izao hetsika izao.
Raha ny nanombohana azy tao Ambohitrinibe-Andraikiba dia nahatratra 30 mahery ireo fiara tsy ara-dalàna tratran’izy ireo. Tsy mbola nanasazy izy ireo, nefa kosa nandidy ny hanatsarana ny fiara vao afaka mahazo ny taratasin’ny fiara.
Fiara mpitatitra ny ankamaroan’ireto tsy ara-dalàna ireto tamin’ity fanombohan’ny hetsika ity, ka ireo fiara mampitohy an’i Betafo no lasibatra tamin’izany. Saika olana teo amin’ny kodiarana sy ny fahavakisan’ny fitaratra no tena betsaka tamin’izany. I Betafo rahateo efa malaza amin’ny faharatsian’ny fiara mpanao zotra rezionaly ka dia izay no nahatratrarana ireto taratasy niisa 30 ireto.